Qaababka gaaban ee guga | Bezzia
Maria vazquez | 20/06/2022 18:00 | Maxaan xirtaa
Waxaad hubtaa in qaar badan oo idinka mid ah kulaylka kululi uu kaa dhigay inaad dharkaaga gaaban kala soo baxdo qolka. Waxayna tahay in dharkan xagaaga uu horeyba u yahay bedel dhab ah oo lagu dhameystirayo dharkeena inkastoo aan weli bedelin xilli ciyaareedka. Ma u baahan tahay fikrado si aad u abuurto dharka leh gaaban bermuda guga?
Dharka gaaban ee Bermuda waxaa lagu qabsan karaa qaabab aad u kala duwan. Iyagoo dhererka jilibka ka dhigayaa beddelka ku habboon xaaladaha qaarkood marka loo eego surwaalka gaaban. Iyaga oo aan joogsanayn inay noqdaan dhar gaaban oo cusub si loola dagaallamo heerkulka sare.
Waxaad samayn kartaa labbis leh surwaal gaaban si aad shaqada u aaddo, si aad ugu raaxaysato galabnimadaada firaaqada ama aad u daawasho tago fasaxaaga xiga. Bermuda gaaban waa maro aad u badan in aad sidoo kale ka heli karto naqshado iyo midabyo kala duwan, iyagoo ah kuwa midabada dhexdhexaadka ah kuwa ugu caansan.
Sideen isku daraa surwaalka gaaban?
Ma waxaad raadinaysaa muuqaal leh surwaal gaaban oo ah ku haboon inuu shaqo tago? Sare iyo shaadh ka badan oo leh suunka lagu calaamadiyo dhexda ayaa u noqday xulafo weyn tan. Kadibna, kaliya waa inaad doorataa qalabka saxda ah, kabaha cidhibta dhexdhexaadka ah iyo dukaanka, tusaale ahaan.
Beddelka kale ee la tixgeliyo waa ku habboon surwaal gaaban Dhammaantood ma fududa in la xidho, laakiin waxay ku siin karaan ciyaar badan iyagoo awood u leh inay isticmaalaan dharkooda si wadajir ah iyo si gooni gooni ah. Xagaagan khamaarka ku habboon ee midabada dhalaalaya, waxay yihiin isbeddel!
Soo jeedinta way badatay haddii aan rabno in aan abuurno labbis leh surwaal gaaban oo aan taxadar lahayn. Xagaagan isku darka gaaban oo leh dusha sare ee dalagga iyo shaati ayaa noqon doona kan ugu hadda. Sidoo kale ma khaldami doontid in aad surwaalkaaga gaaban iyo a shaati suuf ah si ka duwan. Kuwa feeraha leh, tusaale ahaan, waa kuwo caadi ah oo aan ku dhicin isticmaalka.
Ma waxaad ka timid surwaalka gaaban mise had iyo jeer ma sharad gaaban?
Sawirro - @fannyekstrand, @xDayaannax, @xDayaannax, @thestylertalkercom,
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Qaababka gaaban ee guga